MacOS High Sierra 10.13.4 Combo dia misy | Avy amin'ny mac aho
Mpampiasa maro no nitodika tany amin'ny macOS High Sierra Combo Amin'ity indray mitoraka ity, noho ny olana amin'ny fametrahana ny fanavaozana macOS High Sierra 10.13.4. Angamba amin'ity indray mitoraka ity dia olana maro no voatatitra noho ny mahazatra. Raha nanana olana ianao taorian'ny fametrahana na tsy nametraka isaky ny fanavaozana isaky ny fanavaozana dia mahaliana ny mametraka ny Combo an'ity kinova ity.
Iza no tsy mahalala ny atao hoe Combo an'ny kinova macOS, izy io dia ny kinova feno an'ny rafitra fiasa mandra-pahatongan'ny daty. Azonao atao ny misintona azy manaraka rohy.
Soso-kevitra ny hananana combo sy hametrahana an'ity kinova ity, raha toa ka vao haingana ianao no nanova paramères an-tsitrapo na an-tsitrapo ny macOS High Sierra, izay mety hiteraka olana amin'ny famonoana isan'andro sy ny fiaraha-miasa amin'ny Mac. Manoro hevitra anao ihany koa ny hametraka an'ity kinova ity raha sendra tsy misy fanavaozana ianao. Ohatra, raha misy antony tsy nandehananao macOS High Sierra 10.13.1. ary nametraka mivantana ny 10.13.2 ianao, nanolorana anao hametraka ny Combo hanana ny fanatsarana ny rafitra fiasa.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny fisintomana sy ny fametrahana ny combo dia midika hoe misintona mihoatra ny 2GB, izay no anjaran'ny rafitra miasa iray manontolo. Ny macOS High Sierra 10.13.4 manokana dia mitana 2,49GB. Noho izany, miadana kokoa ny fametrahana ny kinova feno. Etsy ankilany, raha miditra amin'ny Mac Apple Store isika ary manery ny fanavaozana, dia ny fanavaozana ihany no ampidininy.
Amin'ity indray mitoraka ity, tranga bebe kokoa noho ny mahazatra no notaterina taorian'ny fanavaozana. Ao amin'ny forum sasany dia mihoatra ny 1000 ny angon-drakitra voangona izay miresaka momba izany. Tadidio fa ny macOS High Sierra dia manana fanavaozana bebe kokoa noho ny kinova macOS hafa hatreto, amin'ny ampahany noho ny olana ara-piarovana hita tao amin'ny macOS tato anatin'ny volana vitsivitsy, izay nanery an'i Apple hanao fanavaozana fiarovana manokana hanaronana ireo lavaka fiarovana kely ireo. Ireto fanavaozam-baovao nifandimby ireto dia mety ho loharanon'ny olana taterin'ny mpampiasa ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » MacOS High Sierra 10.13.4 Combo dia misy
Rafa The dia hoy izy:
Isan'andro dia mitovy amin'ny an'i Güindous izany .. fanavaozana maro, fanombohana miadana kokoa, fianjerana ...
Valiny tamin'i Rafa El
valerian rivas dia hoy izy:
hatraiza ny elanelan'ny leopardan'ny lanezy, ankehitriny ho an'ny boot haingana dia ianao ihany no manana SSD ho kapila lehibe. Androany na Windows 10 aza dia haingana kokoa. Hiverina amin'ny Windows ve aho?
Mamaly an'i valeriano rivas
Taona maro lasa izay dia resy ny avaratra izy ireo. Tsy fantany na tsy tiany izany. Tadiavo ny lalana